एनआरएन , इमिग्रेसन , संबिधान र हामी नेपाली ! जान्नै पर्ने ! – Complete Nepali News Portal
एनआरएन , इमिग्रेसन , संबिधान र हामी नेपाली ! जान्नै पर्ने !
हुनत बिदेशिनु धेरैको रहर होइन । न त बिदेश गएर ग्रिन कार्ड वा पिआर लिनु भनेको नै बिदेशी हुनु नै हो । बास्तवमा एनआरएन हुनको लागि बिदेशको नागरिकता लिएको हुनु पर्दछ न कि पिआर मात्र । एनआरएन आर भनेका नेपाली मूलका विदेशी नागरिक हुन् ।
एनआरएन आर भनेका नेपाली मूलका विदेशी नागरिक हुन् । नेपालको संबिधान अनुसार जब सम्म कानुनत नेपाली नागरिकता त्यागेर बिदेशी नागरिकता लिइदैन, तब सम्म एनआरएन भन्न मिल्दैन । नेपालको संबिधान अनुसार जब सम्म कानुनत नेपाली नागरिकता त्यागेर बिदेशी नागरिकता लिइदैन, तब सम्म एनआरएन भन्न मिल्दैन ।